Fampiharana ny SjHZS90-3B Xixiayuan Project Conservancy Rano | Shantui
Fampiharana ny SjHZS90-3B Xixiayuan Water Conservancy Project
Fotoana fananganana: septambra 2020
Sehatra fampiharana (karazana injeniera): fambolena, ala ary fiarovana ny rano
SjHZS90-3B simenitra silo dia silo taloha an'ny mpanjifa.
Tamin'ny volana septambra 2020 dia nahavita ny fametrahana sy ny asa aman-draharaha ny zava-maniry roa vita amin'ny simenitra SjHZS090-3B an'ny Shantui Janeoo ary natolotra ny mpanjifa ho an'ny fananganana Tetikasa Fampiorenana ny rano Xixiayuan.
Miantehitra amin'ny tombony azo avy amin'ny fandrefesana avo lenta sy ny fampandehanana mety, ny zavamaniry fanaovana beton vita amin'ny simenitra dia mamokatra beton-kalitao avo lenta amin'ny famaritana samihafa arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa, manome akora manta ho an'ny fananganana tetik'asa fitahirizana rano Xixiayuan sy famoahana loharanon-kery. Ity koa no fampiharana mahomby ny fitaovan'ny orinasa amin'ny tetik'asa fiarovana rano nasionaly lehibe aorian'ny Tetikasa Diversion Water Central Yunnan.
Ny Tetikasa Xixiayuan Water Conservancy dia iray amin'ireo tetik'asa lehibe indrindra amin'ny fiarovana rano sy famatsiana rano nasionaly 172. Ny tetikasa dia manambatra ny famokarana herinaratra ary mihevitra ny fampiasana feno ny famatsian-drano sy ny fanondrahana. Ny fikorianan'ny rano tsy miova izay mivoaka avy ao amin'ny Reservoir Xiaolangdi dia navadika ho fikorianana miorina tsara mba hiantohana ny fitohizan'ny ony Yellow Yellow. Mandritra izany fotoana izany dia mamafa ihany koa ny fatiantoka ny faratampon'ny volon-koditra Xiaolangdi Hydropower Station izay miharatra amin'ny renirano any ambany. Ny fiantraikany dia mitana andraikitra lehibe amin'ny tontolo iainana, fiarovana ny tontolo iainana ary ny rano famokarana indostrialy sy fambolena.